musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bharabhasi Kuputsa Nhau » Bharabhasi yekushanyirwa inopindirana neakaremberedzwa muna Chikunguru vanosvika
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Barbados ine, uye inoenderera ichirovera iyi COVID-19 dutu, asi nepo nguva iyi yanga yakaomera indasitiri, iyo BTMI inofara kwazvo kuona mabhureki epashure ekukura kwakanaka.
10,000 vatyairi vendege vakasvika kuBarbados.
Bharabhasi indasitiri yekushanya inorekodha chiitiko chakakura chekushanya muna Chikunguru.
Kushanya kweBarbados kunoona shanduko yakanaka kune indasitiri pamberi pa2021 / 2022 mwaka wechando.
Bharabhasi yakanyora pamusoro pevane zviuru gumi vemhepo vanosvika vatakuri mushure memwedzi yekuomeswa nedenda repasirese. Kekutanga kubva muna Zvita 10,000, indasitiri yekushanya yemuno yakanyora nhanho huru yekushanya pamwe neazvino manhamba kubva kuBarbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) inoratidza shanduko yakanaka indasitiri pamberi pemwaka wechando wa2020 / 2021.
Munguva yaChikunguru 2021, vamwe vashanyi 10,819 XNUMX vakaenda ku Barbados. Huwandu uhu hwakamiririra kuwedzera kukuru kwevashanyi vanosvika 6,745 2020 kana vachienzaniswa nenguva inoenderana yaChikunguru XNUMX.
United States (US) yakabuda pamusoro apo yaikopa chikamu chemusika chemakumi matatu nematatu, nepo United Kingdom (UK) yakapa 34.4% yebhizinesi ne3,722 vanosvika panguva yekuburitsa. Izvi zvakaitika mushure mekunge Barbados yawedzerwa kuUK COVID-19 Green yekutarisa. Bharabhadhi yakave nerombo rakanaka kuiswa pane ino runyorwa rwechipiri kubva kutanga kwechirwere cheCOVID-19.
Panguva imwecheteyo, huwandu hweCaribbean hwakamira pa1,391 390 uye XNUMX vakasvika kubva kuCanada. Izvi zvinomiririra kuwedzera kwevanosvika kubva kumisika iyi miviri pagore.
Wepamberi CEO we Barbados Tourism Kushambadzira Inc. (BTMI) , Craig Hinds, akarondedzera budiriro iyi sedanho munzira kwayo mushure mekuedza kusinganeti, panzvimbo nekunze, kuvaka zvakare chigadzirwa chekushanya.
Akataura kuti "Barbados ine, uye inoenderera mberi nekukunda iyi COVID-19 dutu, asi nepo nguva iyi yanga yakaomera indasitiri, iyo BTMI inofara kwazvo kuona mabhureki ekupedzisira ekukura kwakanaka. Kukura uku kuri mugumisiro wakanangana nekushambadzira kwakanaka uye kushambadzira mumisika yedu yekukunze kuburikidza nemishandirapamwe yakadai sekurudziro yedu ye "Sweet Summer Savings", pamwe nekuchengetedza kudyidzana kwakasimba nevezve ndege, vafambisi vezvikepe nevashanyi vekushanya. "
Muna Chikunguru, BTMI yakabatana pamwe Sandals Resort sezvo vakaunza nhepfenyuro gumi nemashanu eUnited States kubva kumaguta gumi nerimwe kuenda kuBarbados kupa vateereri mukana wekuhwina mazuva mana / matatu-husiku kuSandals Resort muBarbados. Nhepfenyuro nhepfenyuro dzakatepfenyura zviripo kubva Shangu dzeRoyal Barbados uye yaisanganisira vakuru vezvekushanya vachitungamirwa naSen.Mutungamiriri. Lisa Cummins, Gurukota rezveKushanya neInternational Transport. Iyo yekusimudzira, iyo yaitsigirwawo neAmerican Airlines, yakasvika pamusoro pe4,000,000+ vateereri.
MAMERITO SSENFUMA anoti:
Nyamavhuvhu 23, 2021 pa20: 20
Yakanyatsoita Team Barbados kushanya kune iro basa rakakura. kubatana, kubatana pamwe nekudyidzana pamwe nekuchengetedza kudyidzana kwakasimba pamwe nevese vashanyi vekushanya ichave yakakosha mukusimudzira nzvimbo dzekushanya post covid-19 denda.